चाडबाडका अवसरमा एनसेलको विशेष अफर - Nepal Post Daily
चाडबाडका अवसरमा एनसेलको विशेष अफर
बीरगन्जमा मन्दिरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पास !
Nepal Post Daily - December 4, 2020 0
बीरगन्ज, १९ मंसिर । बीरगन्जमा मन्दिरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पास हुँदा विवाद सृजना भएको छ । बीरगन्जस्थित घण्टाघर नजिक रहेको करोडौं मूल्य पर्ने...
उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित केन्द्रिय सदस्यको स्वागत तथा सम्मान
बीरगन्ज, १९ मंसिर - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गत मंसिर १३ भएको निर्वाचनमा विजयी भएका नवनिर्वाचित दुई केन्द्रिय सदस्यलाई बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कर्मचारीले...
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको फेसबुकपेज ह्याक
रजत - December 4, 2020 0
जनकपुर,मंसिर १९। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको फेसबुक ह्याक भएको छ। उनको प्रोफाइल पिक्चरमा युवतीको तस्बिर राखिएको छ। मुख्यमन्त्री राउतको फेसबुक पेज आज बिहान...
काठमाडौं, कार्तिक ६ । यस चाडपर्वको अवसरमा एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले एनसेल नेटवर्क भित्र तथा अन्य नेटवर्कमा रहेका आफ्ना परिवार, आफन्त र साथीभाइसँग अब अझै सुलभ दरमा धेरै कुराकानी गर्न सक्छन् ।
Previous articleनेकपाको सपथ ग्रहणमा झडप आधा दर्जन भन्दा बढी घाइते,७ जना प्रहरी नियन्त्रणमा
Next articleपर्साको सिर्सियामा निशुल्क ट्यिुसन सुरु
Nepal Post Daily - December 5, 2020 0
लहान,२० मंसिर । कोरोना सङ्क्रमणबाट सिराहामा गएराति थप एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मिर्चैया नगरपालिका–१ निवासी ७५ वर्षीय...
नेपाल पोष्ट डेली - December 5, 2020 0
दमौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलालाई रु तीन हजार रकम वितरण गर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा...
काठमाडौँ । महानगरपालिकाले आफू मातहत रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पठनपाठन गराउन स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ। कामपाले आधारभूत कक्षाका लागि पाठ्यपुस्तक तयार गरेको हो।...
नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै, ओली सहभागी होलान् ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको बैठक शनिबार बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ । गत मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका...
देश December 5, 2020